खगित्रा शाहीले जन्माइन् चम्ल्याहा सन्तान – Janapriyakhabar
खगित्रा शाहीले जन्माइन् चम्ल्याहा सन्तान
काठमाडौं : खगित्रा शाहीले चम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएकी छन्। नौ महिना नपुग्दै ३४ सातामा शाहीले चम्ल्याहा सन्तान जन्माएकी हुन्।
‘उनलाई हिँड्न मात्र होइन बस्न, उठ्न र सुत्न गाह्रो भइरहेको थियो’, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)की वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. चन्दा कार्कीले भनिन्।
२७ वर्षीया खगित्रालाई यतिसम्म कि कसैसँग बोल्न नपरेझैं भएको थियो। श्रीमतीलाई खाना खानै कठिन हुँदा सन्तान जन्माउन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने तनाव भएको श्रीमान् पदमबहादुरले सुनाए। किराना पसल सञ्चालक शाही दम्पतीलाई एकैपटक चार सन्तान जन्मिँदाको खुशीसँगै हुर्काउने चिन्ता छ।
खगित्राले बुधबार बिहान ९ बजेर ४० मिनेटदेखि शिशु जन्माउन थालेकी थिइन्। शल्यक्रिया विधिबाट पाँच मिनेटमा लगालग तीन छोरा र एक छोरी जन्माउँदा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ र नर्स चकित परे।
४ लाख गर्भमा एक जनामा चम्ल्याहा सन्तान जन्मिने गरेको विशेषज्ञ बताउँछन्। चम्ल्याहा जन्माउँदा पाठेरघर तन्किन्छ।
खगित्राले शिशुहरूलाई आफूसँग राख्न पाएकी छैनन्। उनी टुलुटुलु हेरिरहन्छिन्। डा. कार्कीका अनुसार सबै शिशुको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। सघन शिशु उपचार कक्ष (एनआईसीयू)मा राखेर शिशुको उपचार भइरहेको छ।
सामान्यतः नवजात शिशुको वजन साढे दुई किलो हुनुपर्छ। तर, खगित्राले जन्माएका चम्ल्याहाको वजन त्योभन्दा कम छ। सबैभन्दा सानो शिशुको वजन जन्मिँदा ९ सय ग्राम थियो। बिस्तारै वजन बढिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। जन्मिँदाको समयमा अर्का शिशुको १.२ र अर्कोको १.५ अनि चौथो शिशुको १.६ किलो थियो। न्यून वजनका शिशुको फोक्सो पूर्ण विकास भएको हुँदैन। श्वासप्रश्वासजन्य समस्या देखिन सक्ने र संक्रमण जोखिम हुने चिकित्सक बताउँछन्। स्तनपानमा पनि समस्या हुन सक्छ।
कैलाली धनगढीका उनीहरू शिशु जन्माउन काठमाडौं आएका हुन्। खगित्राले दोस्रो पटक सन्तान जन्माएकी हुन्। उनले पहिलो सन्तान पनि शल्यक्रिया गरी पाएकी थिइन्। ती छोरी ६ वर्षकी छिन्। छोरी जन्मेपछि उनीहरूले थप सन्तानको चाहना राखेका थिए। बच्चा जन्माउने प्रयास गर्दा विफल भएपछि उपचार गरिरहेका थिए। यसबीच गर्भ बसेको जानकारी धनगढीस्थित एक चिकित्सकले दिएका थिए।
‘उपचारपछि गर्भ बसेको अवस्था थियो। धनगढीमै चम्ल्याहा शिशु भएको पत्ता लागेपछि काठमाडौं पठाएका रहेछन्’, डा. कार्कीले भनिन्, ‘हामीले राखेको दुई हप्ता भयो।’ श्वासप्रश्वासमा समस्या आउन सक्ने भएकाले झन्डै एक साता अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने भएको छ।